विश्व सुन्दरीको भोटिङ अवधी थप « LiveMandu
१३ मंसिर २०७५, बिहीबार ११:११
हरेक बर्ष हुने विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा यसपाली चिनको बेइजिङमा भइरहेको छ । हरेक बर्ष नेपाली चेली पनि प्रतिष्पर्धामा सहभागि हुने गरेता पनि दावेदारी र उत्कृष्ट प्रस्तुती प्रस्तुत गर्न सकिरहेका थिएनन् । बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक र अन्य क्षमता तथा सबलताहरुको मुल्यांकन गरिने यस प्रतियोगितामा श्रृंखलाको सम्भावना प्रवल देखिएको छ ।
१२२ देशका सुन्दरीहरुको सहभागिता भएको यस विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा भोटिङ भइरहेको छ । यसै भोटिङको आधारमा टप ३० विश्वसुन्दरी छनोट गरिने भएको छ । आयोजकले भोटिङका लागि हिजो राती सम्म भनियता पनि पुन भाटिङ गर्ने म्याद भोली बेलुका ५ बजे सम्मका लागि थप गरिएको कुरा जनाइएको छ ।
हालसम्म श्रृंखला खतिवडा भोटिनको दौरानमा उच्च स्थानमा भएता पनि उनको अग्रता खस्किँदो रुपमा गइरहेको छ । त्यसैले एक नेपाली चेली श्रृंखला खतिवडालाइ जिताउन तपाइँको अमुल्य भोटको प्रमुख योगदान रहने छ । तपाइको भोटले राष्ट्रको गौरव बढाउने छ ।
श्रृंखलालाई निम्म तरिकाबाट भोटिङ्ग गर्न सकिन्छ ।
( यो फेसबुक पेज सिर्फ vote गर्नाका लागि खोलिएको अधिकारिक पेज हो त्यसैले सृन्खला खतिवडाका अन्य पेजमा अन्य आइडिमा भोट नगरी ! यसै पेजमा मा भोट गर्नुस । फेसबुकमा भोट गर्न like, comment र share गरे पुग्छ )
त्यसैले vote गरौ! सेयर गरौ!